IPectin Ephakeme Ithela Ngokukhishwa Kwe-Ultrasonic - I-Hielscher Ultrasound Technology
Isizinda se-Ultrasonic siphumela ezithelweni eziphakeme zama-pectin ekhwalithi ephezulu. Kusetshenziswa i-sonication, ama-pectin abalulekile angakhiqizwa kahle kusuka kudoti wezithelo (isb., Ngemikhiqizo evela ekusetshenzisweni kwejusi) nokunye okokusebenza okuluhlaza. Isizinda se-Ultrasonic pectin sidlula amanye amasu wokukhipha ngokukhiqiza isivuno esiphezulu, sinikeze ikhwalithi ephezulu ye-pectin, nenqubo esheshayo yokukhipha.
Ukukhishwa Kwe-Pectin Okuqinisiwe yi-Sonication
I-Pectin isetshenziswa njenge-gelling, emulsifying and thickening agent emikhiqizweni eminingi yokudla kanye nesithako kuzimonyo nakwimithi yokwelapha. Ukukhishwa okujwayelekile kwe-pectin yezimboni kwenziwa ngesizinda samanzi ashisayo, lapho impahla eluhlaza njengamakhasi ezithelo ezisawolintshi, i-apula pomace nezinye izibi zezithelo zifakwa emanzini ashisayo angama-60-100 ° C nge-pH ephansi (cishe i-pH 1.5 - 3.5) isikhathi eside isikhathi. Lokhu kuguqula ukukhishwa okuvamile kwamanzi ashisayo inqubo echitha isikhathi namandla, evame ukungasebenzi kahle ngokwanele ukukhipha inani eliphezulu lama-pectin atholakala kulokho okuluhlaza.
Ukuze unqobe ukungasebenzi ngendlela ejwayelekile yokukhiqiza, isizinda se-ultrasonic sisetshenziswa njengenqubo yokuqinisa inqubo eyehlisa isikhathi sokukhipha futhi ikhulise isivuno se-pectin kakhulu uma kuqhathaniswa nesizinda samanzi ashisayo esiko.
Inzuzo ye-Ultrasonic Pectin Extraction
Isizinda se-Ultrasonic inqubo engeyona eyokushisa, evimbela ngaleyo ndlela izinhlanganisela eziphikisana nokucekelwa phansi okushisayo. Yonke imingcele yenqubo ye-ultrasonic, njenge-amplitude, umfutho, isikhathi, izinga lokushisa kanye nengcindezi, kungalawulwa kahle. Lokhu kuvumela inqubo eqondile nokulawulwa kwekhwalithi futhi kwenza kube lula ukuphinda nokukhiqiza kabusha uma usuthole imiphumela yesizinda. Khipha abakhiqizi balinganisa i-ultrasonication ngenqubo ethembekile yokuphindeka, okusiza ukulinganisa izinqubo nemikhiqizo.
Inqubo Amapharamitha wokukhishwa kwe-Ultrasonic Pectin
Isikhombi se-ultrasonic I-UIP4000hdT i-4kW yokukhipha enamandla yokukhiqiza i-pectin yezimboni.
Ukunqunywa kwamapharamitha wenqubo efanelekile kuvumela ukwengeza inqubo ye-ultrasonic yokukhipha ukuze isebenze kahle kakhulu kanye nekhwalithi ephezulu yokukhipha.
Isibonelo, usayizi wezinhlayiyana zempahla eluhlaza (isb., Ama-citrus peels) kuyinto ebalulekile: Usayizi wezinhlayiyana omncane usho indawo engaphezulu ukuze amagagasi e-ultrasonic asebenze kuyo. Usayizi wezinhlayiyana omncane uholela kulokho kukhiqiza okuphezulu kwe-pectin, izinga eliphansi le-methylation kanye nenani elikhulu lezifunda ze-rhamnogalacturonan (RG).
Inani le-pH lesisombululo sokukhipha (okungukuthi amanzi + i-asidi) enye ipharamitha ebalulekile. Lapho i-pectin ikhishwa ngaphansi kwezimo ezine-asidi, izindawo eziningi ezinamagatsha e-rhamnogalacturonan we-polymer ziyabola, ukuze ikakhulukazi izifunda ze-homogalacturonan (HG) "eziqondile" ezinama-molecule kashukela angathathi hlangothi anamathele noma kuketanga oluyisisekelo olukhulu ahlala.
Isizinda se-Ultrasonic pectin sinciphisa isikhathi sokukhipha futhi sehlisa inqubo yokushisa edingekayo, eyehlisa ithuba lokuguqulwa okungafuneki kwe-pectin ngama-acids. Lokhu kunika amandla ukusebenzisa ama-asidi ngaphansi kwezimo ezivalekile ukuguqula ama-pectin ngokunembile kuzidingo zomkhiqizo.
Yini eyenza i-Ultrasonic Pectin Extraction isebenze kahle kangaka?
Umthelela wesizinda se-ultrasonic uthinta ngqo ukuvuvukala, ukugcotshwa nokwephuka kwezindonga zamaseli. Ukudluliswa kwesisindo okubangelwa i-Ultrasonically kubangela ukufuthwa kwezinto ezinobuthi phakathi kwe-lamella okuholela ekuqhekekeni kwezicubu zemifino. I-Ultrasonic cavitation kanye ne-shear Force kuthinta ngqo izindonga zamaseli bese uzigqashula zivuleke. Lezi zinqubo ziholela emiphumeleni esebenza kahle kakhulu yesizinda se-ultrasonic.
I-pectin ekhishwe nge-Ultrasonically (futhi i-acoustic cavitation isize i-pectin ekhishwe, isifinyezo. I-ACAE) ebinesisindo esiphansi samangqamuzana nezinga le-methoxylation yayicebile esifundeni se-rhamnogalacturonan-I (RG-I) ngamaketanga ohlangothini olude uma kuqhathaniswa ne-pectin evamile yokushisa ekhishwe (CHE) pectin kusuka ekuhlaziyweni kwamakhemikhali ne-FT-IR. Ukusetshenziswa kwamandla kwe-ulgtrasonic pectin isizinda bekuphansi kakhulu kunendlela ejwayelekile yokushisa, ekhombisa ukusetshenziswa kwayo okuthembisayo kwesikali sokukhiqiza kwezimboni.
(Bheka uWang et al., 2017)
UWang nozakwabo (2017) baphinde bagcizelela ukuthi isizinda esisizwa nge-ultrasonically-assisted (UAE) kufakazelwe ukuthi siyinkqubo eyonga kakhulu futhi evikela imvelo ngokusebenza kahle kakhulu futhi kubiza kancane uma kuqhathaniswa nesizinda esivamile sokushisa (CHE).
Isebenza kanjani i-Ultrasonic Pectin Extraction?
Isizinda se-Ultrasonic sisekelwe kwimiphumela ye-sonomechanical ye-high-intensity ultrasound. Ukukhuthaza nokuqinisa ukukhishwa kwe-pectin nge-ultrasonication, amagagasi amakhulu we-ultrasound ahlanganiswa nge-probe ye-ultrasonic (ebizwa nangokuthi uphondo lwe-ultrasonic noma i-sonotrode) kulokho okuphakathi kuketshezi, okungukuthi i-slurry equkethe impahla eluhlaza equkethe i-pectin ne-solvent. Amagagasi e-ultrasound ahamba ngalolu ketshezi futhi akha imijikelezo ephansi yengcindezi / yengcindezi ephezulu. Ngesikhathi semijikelezo enengcindezi ephansi, kudalwa amabhamuza we-vacuum (okuthiwa ama-bubble cavitation), akhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana yengcindezi. Phakathi naleyo mizungezo yokukhula kwamabhamuza, amagesi ancibilikile asoketshezi angena kubhamu elingenalutho, ukuze ibhamu elingenalutho liguquke libe amabhamuza egesi akhulayo. Ngosayizi othile, lapho amagwebu engakwazi ukumunca amandla athe xaxa, agxumagxuma ngamandla ngesikhathi somjikelezo wokucindezela okukhulu. I-bubble implosion ibonwa ngamandla amakhulu wokuqina, kufaka phakathi izinga lokushisa eliphakeme kakhulu nengcindezi efinyelela ku-4000K no-1000atm, ngokulandelana; kanye nokuhlukahluka okuhambisana nokushisa okuphezulu nokucindezela. Lezi zingxabano ezenziwe nge-ultrasonically kanye ne-shear force ziphula amangqamuzana ezitshalo bese zikhulula ama-pectin we-intracellular ku-solvent-based solvent. Njengoba i-cavitation ye-ultrasonic idala ukudluliswa okukhulu okukhulu kwesisindo, imiphumela ye-sonication ithola isivuno esikhulu kakhulu ngesikhathi sokucubungula esifushane kakhulu.
I-Pectin iyi-heteropolysaccharide enamagatsha equkethe izingxenye zamaketanga amade we-galacturonan kanye nezinye ushukela ongathathi hlangothi njenge-rhamnose, i-arabinose, i-galactose, ne-xylose. Ukucaciswa ngokuthe xaxa, i-pectin ibhlokhi le-co-polymer equkethe i-galacturonic acid eyi-1,4-α-exhumene ne-rhamnose eyi-1,2 enamagatsha asohlangothini we-β-D-galactose, L-arabinose namanye amayunithi kashukela. Njengoba kutholakala kuma-pectin amaqembu amaningi kashukela namazinga ahlukene we-methyl esterification, i-pectin ayinaso isisindo samangqamuzana esichaziwe njengamanye ama-polysaccharides. I-Pectin, ecaciselwe ukusetshenziswa ekudleni, ichazwa njenge-heteropolysaccharide equkethe okungenani ama-65% amayunithi we-galacturonic acid. Ngokusebenzisa izimo ezithile zokukhishwa, ama-pectin angashintshwa ngempumelelo futhi asebenze ukuze afeze izidingo ezithile. Ukukhiqizwa kwama-pectin asebenzayo futhi aguquliwe kunentshisekelo kuzicelo ezikhethekile, isb. I-pectin ene-methoxylated low (LMP) yemithi yokwelapha.
Isicucisi se-ultrasonic batch I-UIP2000hdT ngophondo lwe-cascatrode
Ama-Pectins akhishwe kwi-Fruit Waste
Imfucumfucu yezithelo efana namaxolo, izinsalela zezithelo zomuthi (ngemuva kokucindezelwa kwejusi yezithelo), neminye imikhiqizo eyenziwe ngemikhiqizo kaningi imithombo ecebile ye-pectin. Ngenkathi imikhiqizo yemfucumfucu yezithelo ivame ukusetshenziswa njengokudla kwezilwane, ukukhishwa kwe-pectin ukusetshenziswa okubaluleke kakhulu kukadoti wezithelo.
Isizinda se-Ultrasonic pectin sesivele senziwe ngempumelelo ngama-citrus peels (njengamawolintshi, ama-tangerines, i-grapefruit), ama-melon peels, i-apple pomace, i-sugar beet pomace, ama-mango peels, imfucumfucu yetamatisi, kanye nejackfruit, isithelo sothando, amakhasi wamakhiwane phakathi kwabanye.
Izifundo Zamacala we-Ultrasonic Pectin Extraction
Ngenxa yezingqinamba zokukhishwa kwe-pectin evamile ngokushisa, ucwaningo kanye nemboni sezivele ziphenye ezinye izindlela ezintsha njengokukhishwa kwe-ultrasonic. Ngaleyo ndlela, imininingwane eningi yamapharamitha wenqubo yezinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene kanye nedatha yokwenza inqubo iyatholakala.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Pectin kusuka ku-Apple Pomace
UDranca no-Oroian (2019) baphenye inqubo yokukhishwa okusizwa nge-ultrasonically-pectin kusuka ku-apple pomace isebenzisa izimo ezahlukahlukene ze-ultrasonic nokusebenzisa ukwakheka kwangaphandle kwe-Box-Behnken. Bathola ukuthi i-amplitude ye-ultrasound inomthelela omkhulu ekuvuneni nasezingeni le-esterification ye-pectin ekhishiwe, ngenkathi i-pH yokukhipha ibe nomthelela omkhulu kuzo zonke izimpendulo ezintathu, okungukuthi isivuno, okuqukethwe yi-GalA, kanye ne-degree of esterification. Izimo ezilungile zokukhishwa kwakuyi-100% amplitude, i-pH engu-1.8, isilinganiso esiqinile samanzi esingu-1: 10 g / mL, ne-sonication engama-30 min. Ngaphansi kwale mibandela, isivuno se-pectin sasingu-9.183% futhi sasinokuqukethwe okungu-98.127 g / 100 g kwe-GalA kanye ne-83.202% degree of esterification. Ukusetha imiphumela ye-pectin ekhishwe nge-ultrasonically maqondana ne-pectin yezohwebo, isampula ye-pectin etholwe yisizinda se-ultrasonic ngaphansi kwezimo ezifanele zaqhathaniswa nezampula ze-citrus ne-apple pectin yi-FT-IR, DSC, ukuhlaziywa kwe-rheological, ne-SEM. Amasu amabili okuqala aqokomisa imininingwane ethile yesampula ye-pectin ekhishwe yisizinda se-ultrasonic njengobubanzi obuncane bokusabalalisa besisindo samangqamuzana, ukuhleleka okuhlelekile kwamangqamuzana, kanye nezinga eliphakeme lokuqina elalingafani nelama-apple pectin athengiswayo. Ukuhlaziywa kwezimpawu zokuziphatha kwesampula etholwe nge-ultrasonically kukhombisa iphethini yokuzimisela phakathi kokusatshalaliswa kosayizi bezingcezu zalesi sampuli nokuqukethwe kwayo kweGalA ngakolunye uhlangothi, namandla okuthatha amanzi ngakolunye uhlangothi. I-viscosity yesisombululo se-pectin esikhishwe nge-ultrasonically sasiphezulu kakhulu kunaleso sezixazululo ezenziwe kusetshenziswa i-pectin yezentengiso, okungenzeka ukuthi ngenxa yokuhlushwa okuphezulu kwe-galacturonic acid. Lapho futhi sicabanga ngezinga eliphakeme lokuqinisekiswa, lokhu kungahle kuchaze ukuthi kungani i-viscosity yayiphezulu nge-pectin ekhishwe nge-ultrasonically. Abaphenyi baphetha ngokuthi ubumsulwa, isakhiwo nokuziphatha kwe-rheological kwe-pectin ekhishwe yi-ultrasonic isizinda esivela eMalus domestica 'Fălticeni' apple pomace kukhombisa ukusetshenziswa okuthembisayo kwale fiber encibilikayo. (bheka uDranca & Isi-Oroian 2019)
Indlela yokukhipha i-pectin ye-ultrasonic idlula ngo-
izimo zokucubungula ezinamandla
Isikhombi Sokusebenza Okuphezulu se-Ultrasonic sePectin Production
Isizinda se-Ultrasonic ubuchwepheshe bokusebenza obunokwethenjelwa, obusiza futhi busheshise ukukhiqizwa kwama-pectin asezingeni eliphakeme izinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene ezifana nemikhiqizo yezithelo ezisawolintshi kanye nama-peels, i-apple pomace nezinye eziningi. Iphothifoliyo yeHielscher Ultrasonics ifaka uhla oluphelele kusuka kuma-compact lab ultrasonicators kuya kumasistimu wokukhipha ezimbonini. Ngaleyo ndlela, thina kwaHielscher singakunikeza i-ultrasonicator efaneleke kakhulu kunqubo yakho ebekiwe yenqubo. Abasebenzi bethu besikhathi eside abanolwazi bazokusiza ekuhlolweni okungenzeka nasekusebenziseni inqubo ekufakweni kohlelo lwakho lwe-ultrasonic ezingeni lokugcina lokukhiqiza.
Iphothifoliyo yomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele lwe-extractors ephezulu ye-ultrasonic kusuka ezincane kuya ezinkulu. Izesekeli ezingeziwe zivumela ukuhlangana okulula kokucushwa okuhle kakhulu kwedivayisi ye-ultrasonic yenqubo yakho yokukhipha i-pectin. Ukusetha okulungile kwe-ultrasonic kuya ngomthamo ocatshangelwe, ivolumu, impahla eluhlaza, inqubo ye-batch noma i-inline kanye nomugqa wesikhathi.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angasetshenziselwa ukuqhutshwa nokuqhutshwa kokugeleza okuqhubekayo. Ukucubungula kwe-batch ultrasonic kufanelekile ekuhlolweni kwenqubo, ukwenziwa kahle futhi kube sezingeni eliphansi lokukhiqiza likasayizi ophakathi. Ngokukhiqiza inani elikhulu le-pectin, ukucubungula okusemgqeni kungaba lusizo kakhulu. Inqubo eqhubekayo yokuxuba emugqeni idinga ukusethwa okuyinkimbinkimbi – equkethe iphampu, amapayipi noma amapayipi namathangi -, kodwa isebenza kahle kakhulu, iyashesha futhi idinga abasebenzi abancane kakhulu. I-Hielscher Ultrasonics inokusetha okufanele kakhulu kokukhipha ivolumu yesizinda sakho nezinhloso zenqubo.
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza isibonisi esigcwele sama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla olugcwele lomkhiqizo lusivumela ukuthi sikunikeze okukhipha okulunge kakhulu kwe-ultrasonic kwezinto zakho eziluhlaza eziqukethe i-pectin, amandla enqubo nezinhloso zokukhiqiza.
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ekukhiqizeni. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kwe-ultrasonic isizinda se-pectin esivela kwizithelo kanye ne-bio-waste.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokuphatha impahla yakho eluhlaza ngezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekile yemiphumela emihle kakhulu yokukhipha!
Izinqubo ze-Ultrasonic zingalinganiswa ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi yonke imiphumela oyizuzile usebenzisa ilebhu noma ibhentshi-phezulu i-ultrasonicator, ingakalwa ngokukhishwa okufanayo kusetshenziswa amapharamitha wenqubo efanayo. Lokhu kwenza i-ultrasonication ilungele ukuhlolwa okungenakho ubungozi, ukwenziwa kwenqubo nokwenza okulandelayo kokukhiqizwa kwezentengiso. Xhumana nathi ukuze ufunde ukuthi i-sonication ingakhulisa kanjani ukukhiqizwa kwakho kwe-pectin.